Indlela yokususa unxantathu onothando
Noma yikuphi amaphupho omfazi okuhlala nomyeni wakhe ngokuthula, othandweni nokuvumelana, kodwa akuwona wonke umuntu ophumelelayo. Kungani? Yebo, ngoba abesifazane abaningi bavame ukukhohlwa noma bamane nje bengathandi ukwamukela futhi baqonde ukuthi umuntu "wenza olunye uhlolo."
Ekuphileni, kunezimo ezihluke kakhulu, ikakhulukazi ngaphambili kwothando. Yebo, ngubani ongazi, ake sithi isimo esinjalo? Umfana ovamile wayehlangana emgwaqweni enentombazane, babenesihawu, imihlangano eqhubekayo, izinkulumo zenhliziyo, izinhliziyo, ukuqashelwa ngokucophelela okunye nokusha komunye nomunye. Kodwa-ke, le ntombazane ihlangana nensizwa efana ne-suitcase - futhi ukuyiphonsa isihawu, futhi ithwale kakhulu. Kodwa lo mhlobo omusha naye uyamthanda kakhulu futhi akahlose ukulahlekelwa yikho, ngoba, njengendoda enhle kakhulu, futhi yena, owesibili-owenziwe, usuvele emkhonze ngomona ongapheli.
Kungaba kuhle kuleso simo nje ukuchitha ubudlelwane obudala bese uphelela ngokuphelele emthandweni omusha, kepha intombazane iyesaba, nhlobo, kuneminyaka engaphezu kweminyaka emithathu yobuhlobo, kodwa kunezinyanga ezintathu kuphela zokuthandana. Sula futhi saziwa ngokumelene nakho konke okusha futhi ngaleyo ndlela kwesabisa. Ngentombazane lokhu kuyinkimbinkimbi enkulu, ngakho-ke uyaphonsa ikhanda lakhe kanye naye kanye namagundane akhe. Futhi umthandi ompofu ngekhulu lekhulu uyabuza: "Yini engingayenza? Angisakwazi ukukwenza lokhu ... "
Ngokuvamile, ukunikeza izeluleko ezihlukahlukene akuyona into eqinisile, ngoba noma yikuphi isimo sinomuntu siqu futhi azikho nje "izindlela zokuthokoza" ezivamile. Kodwa uma uthanda, ungabelana ngokuhlangenwe nakho kwakho kuphela, futhi kufinyelele kuwo wonke umuntu - ukuthi ungayisebenzisa kanjani le lwazi. Njengoba bethi, kungcono ukuthola ulwazi olwenziwe ngamaphutha abanye abantu, futhi kusukela "isihloko" se-"triangular", ngokuqinisekile, ngamunye wethu kufanele afunde ngokusebenzayo, ngakho-ke nginikeza umuntu wami esikhundleni somfanekiso wesithombe nesevisi yokubuka indlela yokwenza kangcono nokuthi ungayilahla kanjani kusukela kunxantathu yothando.
Indaba engizoyisho manje ilula kakhulu. Emva kweminyaka engama-3 yokusebenzisana nomfana owayenomona kimi yonke insika, futhi ngaphandle kwalokho, wabeka zonke izakhiwo zakhe eziningi kimi, ekugcineni ngahlangana naye. Wathi lawo mazwi! Wafunda izinkondlo ezinjalo! Futhi ukuncoma kwakhe? Yebo, angizange ngibone isimo sengqondo empilweni yami, kwakunezincwadi namabhayisikobho kuphela mayelana nothando! Ngenxa yalokho, ikhanda lami lalivulekele, izinyoni zazihlabelela emphefumulweni wami, amehlo ami abona kuphela ama-roses, imilenze yami ayizange isithinte emhlabathini, ngokujwayelekile isethi ephelele yazo zonke izinhlobo zokuhlangenwe nakho okuthandana.
Ifu elincane kuphela elisekugcineni libheke - unkosikazi wakhe oneminyaka eyisithupha ubudala. Kodwa angiyena uhlaka, ngiyaqonda ukuthi ingane encane idinga ubaba, ngakho angizange ngithathe umyeni wami ngaphandle komndeni. Futhi iqiniso lokuthi ungcono nami kuzo zonke izici, kahle, ingabe iphutha lami ukuthi umkakhe ungumuntu nje. Mhlawumbe kwakudingeka ukuthi ngishiye ubuhlobo kuleso simo, futhi konke kuzoba kuhle: emva kwesikhathi esithile, ngabe ngikhathele nje ngokuba ngunkosikazi kuphela, futhi kungenzeka ukuthi ngizomshiya, noma yena ngokwakhe uqale ukuphumula. Kunoma yikuphi, lezi zinsuku zizobe zilungile - ngamunye wethu wazi imithetho yemidlalo futhi angakwazi ukuphuma ngaso sonke isikhathi. Kuyacaca ukuthi isitatimende esinjalo sombuzo sinengqondo futhi sinengqondo, futhi othandekayo wami uzibheka njengothando olukhulu, ngakho-ke ubudlelwano bethu bukhulunywe esimweni esivelele kakhulu ngemininingwane yengozi. Kujwayele, akunjalo?
Futhi manje iseluleko esisebenzayo sokususa unxantathu onothando. Ngenye yezimpawu, kuzomele uzame ukuhlola ngokuzenzekelayo amathuba akho emzabalazweni olandelayo bese unquma ngokwanele indawo ohlala kuyo. Iqiniso lokuthi izitho zengxantathu zilingana, ziyiqiniso kuphela kwizibalo, futhi othandweni, ngisho noxantathu lwe-isosceles yi-rarity enkulu, yini esingayisho mayelana ne-equilateral.
Udinga ukuzama ukuhlukana nezibuko zakho ezibhakabhaka okungenani okwesikhashana, ukuze ukubukeka okubukeke kungacubungula into enomdlandla, noma mhlawumbe udinga ukuguquka futhi uhambe nje, ukuze ungazisoli ngokuthi isikhathi sichithwe ngokungenhloso. Kumelwe sizame konke okusemandleni ethu ukuqeda unxantathu wothando. Cabanga nje okwesikhashana ukuthi ngabe kwenzekani uma ehlukanisile nomkakhe, bese uqaphela ukuthi lokhu akuyona neze umuntu ongaphila kuyo, nokuthi ungathanda ukuzala ingane.
Akudingeki uzivumelanise nezindinganiso zokulindela komlingani, yiba ngowakho kuphela futhi kuqala ulandele izithakazelo zakho, futhi ungasungulwa izimiso zomunye umuntu. Lahla isimo esicindezelayo njalo.
Ngeke ukwazi ukuzivumela ukuba ukhohliswe futhi udliwe ngezithembiso ezingathandeki, uma uzizwa ukungathembeki.
Ungalokothi udedele umbono wabanye noma abantu abaseduze nawe. Njengesiqondiso sangempela sokwenza isinyathelo, ngokuqinisekile akufanelekile, kodwa njengesivivinyo esivela enhlanganweni engathandekayo banenzuzo enkulu. Ukusuka ngaphandle nangaphakathi, noma yikuphi into enekhono lokubukeka, ngisho nobuhlobo bomuntu, ngisho nangaphezulu.
Futhi, ekugcineni: ungakhathaleli uhlangothi lwesithathu lwenxantathu, okuyinto ovame ukuyazi ngokungekho. Akungabazeki ukuthi yena (noma) uzovele ephethe isikhundla, futhi uzolinda nje ukuthi ikhadi lilale phansi. Ngisho noma kwenzeka ukuthi wena nomthandi wakho (noma inkosikazi) bebethelwe kwezinye izindawo ezingeni lezakhamuzi ezingekho emthethweni, khona-ke kukhona ithuba elibaluleke kakhulu ukuthi lo mcimbi uzovele uvele. Khona-ke ukuqeda unxantathu wothando kuyoba lula kunalokho ucabanga.
Futhi kakade sekwephuzile kakhulu. Lapha umuntu angabuyela kulabo abakha isimo "esingunxantathu" ngokwabo: yibani nesibindi sokuqaphela ngokugcwele ukuthi ukhululekile ukuthatha umthwalo owodwa wenkambiso yakho siqu, kanye nezinhloso zalabo ababili unesifiso sokudonsela kulo mdlalo. Ungaziphoqeleli ukuba benze ukucabanga okungalungile nokungalungile ("Zikhethele wena, ngidinga wena ngezinkinga ezinjalo?"). Nguwe okufanele ukhethe futhi anqume ukuthi yikuphi okufanele ukwenze futhi ususe unxantathu wothando.
Ukululekwa kwengqondo, i-psychotherapy yeqembu
Kungani kunzima ukuthola uthando?
Ukuzethemba okuphansi. Izimfihlo zokuzethemba
Umona: isisusa sokufeza noma umbulali wenjabulo?
Ungaphila nomamazala wami
Owesifazane ngemuva kwesondo: izinzuzo nezingozi
Okushiwo igama elithi "umona" ekuziphendukeni kwengqondo
Yeka ukuthi izicathulo zithinta kanjani impilo yabantu
Ziyini amaphilisi okukhulelwa nokuzikhethela?
I-Tarot - ukubikezela inhlanhla emabalazweni
I-horoscope ejabulisayo yezibonakaliso zezinkanyezi
Ukuthuthukiswa kokuqala kwengane kusukela emkhunjini
Cocktail ngewayini elikhazimulayo
Ukunakekelwa kwezinyo lwezingane
Ikhalenda yezeMpilo: Ngo-Ephreli, kuMeyi, ngoJuni, kuJulayi
Ukunakekelwa kokuthungana komntwana
Ungakhetha kanjani umdanso wokuqala womshado?
Biography of Leonid Yarmolnik
Iphuzu lokubuka kwamadoda ebuhlotsheni
Spaghetti nama amakhowe ngosawoti omuncu ushukela
I-Horoscope ngoJanuwari: amawele
Ungalungiselela kanjani ukugcwalisa ukugcwalisa?
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngibe nesiqhwa esihle?
Indlela yokuqaphela indoda emaminithini okuqala okujwayele